ISONJULULWE: ISEVA YE-DNS AYIPHENDULI IMPAZAMO WINDOWS 10 - KWENZIWA KANJANI
Isonjululwe: Iseva ye-DNS ayiphenduli Impazamo Windows 10
Igqityelwe ukuhlaziywa Nge-17 ka-Epreli 2022
Iseva ye-DNS engaphenduli ingxaki yenye yeengxaki eziqhelekileyo Windows 10 abasebenzisi. Xa uzama ukuqhagamshela kwi-intanethi, Awunakujongana nangxaki yoqhagamshelwano lwe-intanethi. Ukuba usebenzisa iNethiwekhi Diagnostic isixhobo fumana ingxaki ngalo myalezo ‘Ikhompyuter yakho ibonakala iqwalaselwe ngokuchanekileyo, kodwa isixhobo okanye isixhobo (iseva ye-DNS) ayiphenduli’. Le yingxaki embi kumsebenzisi wefestile. Le mpazamo Yenzeka xa iseva ye-DNS eguqulela igama lesizinda ayiphenduli ngaso nasiphi na isizathu. Ukuba nawe unengxaki nale ngxaki, nazi izisombululo ezisebenzayo zokulungisa iiseva ze-DNS ezingaphenduliyo Windows 10, 8.1, kunye ne-7.
Yintoni iseva ye-DNS
Powered by 10 YouTube TV isungula into yokwabelana ngosapho Yabelana Ngokuhlala Okulandelayo
I-DNS imele i-Domain name server sisiphelo ukuya kwisiphelo somncedisi oguqulela iidilesi zewebhu (sibonelela ngophendlo lwephepha elithile kwidilesi yokwenyani yephepha lewebhu. Isombulula idilesi yendawo kwidilesi ye-IP. Kuba ikhompyutha iqonda iidilesi ze-IP kuphela) ukuze ukwazi ukufikelela kwaye ukhangele i-intanethi.
Ngamagama alula, xa ufuna ukufikelela kwiwebhusayithi yethu: https://howtofixwindows.com kwiChrome, iseva ye-DNS iyiguqulela kwidilesi yethu ye-IP yoluntu: 108.167.156.101 ukuze iChrome iqhagamshelane nayo.
Kwaye ukuba kukho into engahambi kakuhle ngeseva ye-DNS okanye iseva ye-DNS iyeka ukuphendula, awukwazi ukufikelela kwiiwebhusayithi nge-Intanethi.
Uyilungisa njani iseva ye-DNS windows 10
Qala kwakhona i-router okanye imodem oqhagamshelwe ngayo kwi-Intanethi (cima nje amandla kwi-1 -2 imizuzu) kwakhona Qalisa kwakhona isixhobo sakho seWindows;
Khangela ukuba i-Intanethi iyasebenza kwezinye izixhobo zakho nokuba iimpazamo zeDNS ziyavela na kuzo;
Ngaba usanda kufaka naziphi iinkqubo ezintsha? Ezinye ii-antivirus ezine-firewall eyakhelwe-ngaphakathi, ukuba ayilungiswanga kakuhle, zinokuvala ukufikelela kwi-Intanethi. Khubaza okwethutyana i-Antivirus kunye ne-VPN (ukuba iqwalaselwe) Kwaye jonga Akukho ngxaki yokudibanisa kwi-intanethi.
Jonga iDNS inkonzo yomxhasi Iyasebenza
Cinezela Windows + R, uhlobo iinkonzo.msc, kwaye kulungile Ukuvula ikhonsoli yolawulo lweeNkonzo
Skrolela ezantsi, kwaye ujonge inkonzo yomxhasi weDNS,
Jonga ukuba imeko yayo iyasebenza, Cofa ekunene kwaye ukhethe qala kwakhona
Ukuba inkonzo yomxhasi weDNS ayiqalwanga, cofa kabini ukuvula iipropati zayo,
Guqula uhlobo lokuqalisa ngokuzenzekelayo, kwaye uqalise inkonzo ecaleni kwemo yesevisi.
qala kwakhona iifestile kwaye ujonge uqhagamshelo lwe-Intanethi lusebenza kakuhle.
Gubha i-DNS kwaye uSete kwakhona i-TCP/IP
Chwetheza i-cmd kwimenyu yokuqalisa ukukhangela cofa ekunene kwi-prompt yomyalelo khetha ukubaleka njengomlawuli.
Ngoku chwetheza lo myalelo ulandelayo kwaye ucinezele u-Enter emva komnye nomnye:
ukusetha kwakhona kwe-netsh winsock
netsh int IP4 ukusetha kwakhona
Qala kwakhona iifestile kwaye ujonge i-Flushing DNS Lungisa i-DNS Server engaphenduli impazamo Windows 10.
Guqula idilesi ye-DNS (Sebenzisa i-Google DNS)
Ukutshintsha idilesi ye-DNS linyathelo lokuqala ukulungisa iseva ye-DNS engaphenduli Impazamo. Ukwenza Oku
Yiya kwiPhaneli yoLawulo> Inethiwekhi kunye ne-Intanethi> Inethiwekhi kunye neziko lokwabelana.
Ngoku cofa kwi Guqula i-Adapter Setting.
Khetha iadaptha yakho yenethiwekhi kwaye ucofe ekunene kuyo kwaye uye kwiiProperties
Cofa kabini kwi-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
Ngoku seta iDNS yakho apha Sebenzisa iDNS eKhethayo: 8.8.8.8 kunye neDNS engenye 8.8.4.4
Ungasebenzisa kwakhona i-DNS evulekileyo. Oko kukuthi 208.67.222.222 kunye 208.67.220.220.
Uphawu lokukhangela ekuqinisekiseni useto ekuphumeni.
Qala kwakhona iifestile kwaye ukhangele ingxaki isonjululwe okanye hayi.
Ukuba ukutshintsha i-DNS akuzange kuyilungise ingxaki, vula i-Command Prompt.
Uhlobo IPCONFIG / ZONKE kwaye cinezela Enter.
Ngoku uya kuyibona idilesi yakho yeNdawo ezantsi kwayo. Umzekelo: FC-AA-14-B7-F6-77.
Cinezela Windows + R, chwetheza ncpa.cpl, kwaye ulungile ukuvula ifestile yoqhagamshelo lwenethiwekhi.
Cofa ekunene kwiadaptha yenethiwekhi yakho esebenzayo khetha iipropathi.
Apha phantsi kwesithuba esiphezulu fumana idilesi yeNethiwekhi kwicandelo lepropati kwaye uyikhethe.
Ngoku phawula kwixabiso kwaye uchwetheze idilesi yendawo yakho ngaphandle kwemida.
Umzekelo: Idilesi yam yendawo yile FC-AA-14-B7-F6-77 . Ke ndiza kuchwetheza iFCAA14B7F677.
Ngoku cofa ku-OK kwaye uqale kabusha iPC yakho.
Hlaziya abaqhubi beAdapter yeNethiwekhi
Cinezela uhlobo lweWindows + R devmgmt.msc kwaye kulungile ukuvula umlawuli wesixhobo.
Yandisa iiadaptha zeNethiwekhi,
Cofa ekunene kwiadaptha yenethiwekhi efakiweyo kwaye ukhethe Hlaziya abaqhubi.
Khetha ukhetho Khangela ngokuzenzekelayo kwisoftware yomqhubi ohlaziyiweyo
Vumela iifestile zijonge uhlaziyo lwamva nje lomqhubi, ukuba lukhona olu luya kuhla kwaye lufake ngokuzenzekelayo.
Qala kwakhona iifestile kwaye ujonge ukuba akusekho iingxaki zeNethiwekhi kunye ne-intanethi.
Ukuba oku ngasentla akusebenzanga yiya ku iwebhusayithi yomenzi kwaye ufake umqhubi ohlaziyiweyo wamva nje. Qalisa kwakhona ukusebenzisa utshintsho, kwaye ujonge ingxaki ilungisiwe okanye hayi.
Abanye abasebenzisi baxela ukukhubaza i-IPv6 ukubanceda ukulungisa ingxaki yeseva ye-DNS.
Cinezela Windows + R, uhlobo ncpa.cpl kwaye kulungile,
Cofa ekunene kwinethiwekhi esebenzayo/iadaptha yeWiFi khetha iipropathi,
Apha sukukhangela ukhetho lwe-Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)
Cofa u-Kulungile uze ucofe Vala. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
Ngaba ezi zisombululo zanceda ukulungisa iseva ye-DNS engaphenduliyo windows 10? Sazise kwizimvo ezingezantsi, funda kwakhona:
IChrome Ayikwazanga ukuQhagamshela kwiSeva engummeli (err_proxy_connection_failed)
Isonjululwe: IMicrosoft Edge ayisebenzi emva kweefestile 10 1809 uhlaziyo
I-AMD Radeon Software iyekile ukusebenza Windows 10, 8.1 kunye ne-7
PFN_LIST_CORRUPT (Ibug Jonga 0x4E) BSOD kwi-Windows 10, 8.1 kunye ne-7
Uyenza njani iakhawunti yomsebenzisi Windows 10 ngaphandle kwe-imeyile